आज फागुन २ गते आईतबार, कस्तो रहला तपाईको दिन ? हेर्नुहोस् आजको राशिफल !
फागुन ०१, २०७७ SG
विवाहोत्सुकले जीवनसाथी भेट्ने योग रहेको छ। सामाजिक रूपमा यश-कीर्ति मिल्नेछ। व्यापारमा लाभ मिल्नेछ। भ्रमणको व्यवस्था गर्नुहुनेछ। मध्यान्नपछि मानसिक एकाग्रतामा कमी देखिनेछ। स्वास्थ्य बिग्रिन सक्ला ।
कुन पनि प्रकारको मानसिक भारबाट मुक्त रहनुहुनेछ। शारीरिक रूपबाट तपाईको स्वास्थ्य स्वस्थ रहनेछ। पारिवारिक जीवनमा सुख-शान्ति अनुभव गरुहुनेछ। व्यवसायमा यश मिल्नेछ। कार्यको चर्चा हुनेछ र उच्च अधिकारी तपाईबाट प्रसन्न रहनेछन्। मध्यान्नपछि नयाँ कार्यको आयोजन गर्नुहुनेछ।
दिन मिश्र फलदायी रहनेछ। स्वास्थ्यमा केहि उतार-चढाव आउनेछ । व्यावसायिक स्थलमा उच्च अधिकारीको अप्रसन्नताले तपाई निराश रहनुहुनेछ। पैसा खर्च हुनेछ। सन्तानको चिन्ताले सताउनेछ। मध्यान्नपछि तपाईको कार्यमा सफलता हुनाले मन प्रसन्न रहनेछ। व्यापारमा पनि वातावरण अनुकूल रहनेछ।
मनलाई शान्त र प्रफुल्लित राख्नको लागी ईश्वरको नाम-स्मरण गर्नुहोला। क्रोधलाई वशमा राख्नुहुनेछ। अनैतिक कृत्य र नकारात्मक विचारलाई टाढा राख्नुहोला। धनको समस्या रहनेछ। मध्यान्नपछि शारीरिक स्वस्थता र मानसिक स्वस्थता प्राप्त हुनेछ। व्यावसायिक स्थलमा उच्च अधिकारीबाट सम्हालेर हिडनुहोला। कसैसँग उग्र वादविवाद नगर्नुहोला।
स्वास्थ्यको हिसाबले तपाई खुशी रहनुहुन्छ। साथी र आफन्तसँग यात्राको योजना बनाउनुहुनेछ। सामाजिक रुपले सम्मान प्राप्त गर्नुहुनेछ। आफन्तसँग छलफल सकारात्मक रहनेछ। रिसको भावना बढ्नेछ। पारिवारिक बहसबाट बच्न, बोलीमा ध्यान राख्नुहोला।अधिक खर्चले आर्थिक समस्या निम्त्याउनेछ।
तपाईको स्वभावमा केहि अधिक संवेदनशीलता रहनेछ। कार्य सफलताले मानसिकरुपबाट प्रफुल्लित रहनुहुनेछ। यश र कीर्ति वृद्धि हुनेछ। शारीरिक र मानसिक रूपले तपाई प्रसन्न अनुभव गर्नुहुनेछ। पारिवारिक सुख-शान्ति बनिरहनेछ। प्रत्येक कार्यमा मनोबलको दृढता र आत्मविश्वास छल्किनेछ।
बौद्धिक शक्तिबाट लेखन कार्य र अन्य सृजनात्मक कार्य गर्नमा अगाडी बढ्नुहुनेछ। विचारमा शीघ्र परिवर्तनबाट मानसिक रूपले स्वस्थ रहनुहुनेछैन। आकस्मिक खर्च हुने योग रहेको छ। मध्यान्नपछि कार्य- सफलता मिल्नाले मानसिक रूपले प्रसन्न रहनुहुनेछ। यश र पनि प्राप्त हुनेछ। व्यवसायिक क्षेत्रमा सहकर्मीको सहयोग प्राप्त गर्नुहुनेछ। परिवारको वातावरण आनन्दपूर्ण रहनेछ।
विधार्थीको लागी अनुकुल दिन रहेको छ। नयाँ वस्त्राभूषण तथा प्रसाधनमा खर्च हुनेछ। आर्थिक योजना सरल बनाउनु हुनेछ। मध्यान्नपछि वैचारिक स्थिरता रहनेछैन।
शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य स्वस्त रहनेछ। परिवारसँग भ्रमणको आयोजन गर्नुहुनेछ। मित्र र आफन्तसँग समय आनन्दपूर्वक सदुपयोग हुनेछ। मध्यान्नपछि शारीरिक र मानसिक रूपले व्यग्रता अनुभव गर्नुहुनेछ।
अधिक वाद-विवाद नगर्नुहोला। धार्मिक कार्य र उपासनामा खर्च हुनेछ। परिवारसँग मनमुटाव नहोस् यस कुराको ध्यान राख्नुहोला। मध्यान्नपछि मन प्रफुल्लताको अनुभव गर्नुहुनेछ। शारीरिक रूपले स्वस्थ रहनुहुनेछ। भाग्यमा वृद्धि हुने योग रहेको छ।
कुनै नकारात्मक भावनालाई महत्व नदिएर मानसिक रूपले स्वस्थ रहनुहुनेछ। शारीरिक प्रफुल्लता र मानसिक प्रसन्नता दिनभर बनिरहनेछ। धार्मिक कार्य प्रति आकर्षित रह्नुहुनेछ। विधार्थीले पढन – लेखनमा अनुकूलता रहनेछ। गृहस्थ जीवन शान्तिपूर्ण बनिरहनेछ।
पैसाको लेन-देन वा लगानी गर्नुहुनेछ। कुनै पनि कार्य विध्न नहोस् यस कुराको ध्यान राख्नुहोला। बोलि र क्रोधमा ध्यान राख्नुहोला। अकस्मातबाट सम्हालेर बस्नुहोला। मध्यान्नपछि शारीरिक र मानसिक स्वाय्थ्यमा सुधार आउनेछ। धार्मिक र आध्यात्मिक प्रवृत्ति तर्फ मन लागिरहनेछ।
प्रकाशित : शनिबार, फागुन ०१, २०७७१९:१८
रुपन्देही जिल्लामा प्रचण्ड-नेपाल समूहलाई कडा धक्का, ओली समूह मक्ख !